२०० सांसद्को जुलुश लिएर सर्वोच्च अ’दालत जाने प्रचण्डको घोषणा ! – नेपाली सूर्य
२०० सांसद्को जुलुश लिएर सर्वोच्च अ’दालत जाने प्रचण्डको घोषणा !
December 21, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on २०० सांसद्को जुलुश लिएर सर्वोच्च अ’दालत जाने प्रचण्डको घोषणा !
काठमाण्डौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक छल, बेइमानी गरेको बताएका छन्।
सोमबार बानेश्वरमा प्रचण्ड-माधव कुमार नेपाल निकट सांसदहरूको संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीमा कल्पनै गर्न नसकिने छलकपट भएको बताएका हुन्। ‘उहाँमा(प्रधानमन्त्री) छल, बेइमानी यति धैरे भयो कि कल्पनै गर्न सक्दिनँ’, बैठकमा बोल्दै उनले भने। संवैधानिक नियुक्ति विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले ढाँटेको उनले बताए।
आइतबार बिहान संसद भग्न हुनेबारे आफूलाई जानकारी आएकोबारे सोध्दा पनि त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले केही नबताएको उनको दाबी छ। यसका साथ उनले प्रधानमन्त्रीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने भोलिको बैठकले निर्णय गर्ने बताए। ‘अब संसदीय दलबाट दलको नेता पर्सि चुन्छौं। अनुशासनको कारबाही गर्ने भोलिको बैठकले निर्णय गर्छ’, उनले भने,‘पार्टीको निर्देशन ध्यान दिएर संसदीय दलमा निर्णय गर्छौं।’
यो संविधानले संसद विघटनको अधिकार नदिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई पनि उक्त अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार नभएको बताए। ‘हाम्रो अधिकारको अप हरण भएको छ। हामीलाई मारि एको भनिएको छ। तर हामी ज्यूँदै छौं,’उनले भने,‘प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संसदलाई मार्‍यौं भनेका छन् तर अब हामी जीवित छौं भनेर अ’दालतमा जाँदैछौं। झण्डै २ सय जनाको जुलुस लिएर सर्वोच्च गएपछि मर्‍यो भन्न मिलेन। सर्वोच्चले त्यो भन्न मिल्दैन।
टिकटक बनाउने क्रममा पुलबाट खसेर ग’म्भीर घाइते भएका रमेश थापाको मृत्यु
कहाँ छ देश प्रेम ! सबै नेताहरु कोरोना भाइरस भन्दा पनि खतरनाक भाइरस हुन्
दुखद खबर: बाइक जोगाउन खोज्दा विवाहको ६ महिनामै सिन्दुर पुछियो, यसरी भयो मृत्यु
तीन लाख २० हजार घुस लिँदै गर्दा नायवसुब्बा सहित २ कर्मचारी पक्राउ परे
November 20, 2020 Nepali Surya